Sports Archives - Page 18 of 20 - YTV
Home » Programs » Sports » Page 18
ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်နဲ့ ပွဲကို ပါဝင်ဖို့ မသေချာတဲ့ ပေါ့ဘာ
September 14, 2020 1:41 am
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်း ကစားသမား ဖြစ်သူ ပေါ့ဘာဟာ အသင်းရဲ့ ပထမဆုံး ရာသီ အဖွင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်ကို ပါဝင်ဖို့ မသေချာဘူးလို့ သိရပါတယ်၊ သူဟာ COVID-19 […]
VUC အသင်းယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် အာရှဖူဆယ်ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကို ဖျက်သိမ်း
September 13, 2020 12:39 am
မြန်မာဖူဆယ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ VUC ဖူဆယ်အသင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် အာရှဖူဆယ် ကလပ် ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကို ဖျက်သိမ်းကြောင်း စက်တင်ဘာလလ(၁၀)ရက်မှာ အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်. အာရှဖူဆယ်ကလပ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက်ကနေ (၁၃)ရက်နေ့အထိ ယူအေအီးနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး အုပ်စုမဲခွဲပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ […]
အမျိုးသမီး ဘောလုံး ကလပ်အသင်း စတင်ဖွဲ့စည်းမယ့် ဒေါ့မွန် အသင်း
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ကလပ် ဒေါ့မွန် အသင်း အနေနဲ့ အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ဘောလုံး ကလပ် အသင်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ သိရပါတယ်… ဒေါ့မွန် အသင်းဟာ အခုလို ဖွဲ့စည်းမယ့် အမျိုးသမီး […]
ကစားသမားစာရင်း ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Royal Ruby အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း
လာမယ့်နှစ်မှာ ကျင်းပမယ့် အမျိုးသမီးလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို အသင်းသစ်တသင်းဖြစ်တဲ့ မိုးကုတ်မြို့ အခြေစိုက် Royal Ruby အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်. ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၉)ခုနှစ်က စတင်ကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Royal Ruby အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာ မိုးကုတ်မြို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်က […]
အသင်း ဥက္ကဋ္ဌသစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတော့မယ့် ဘာစီလိုနာ
ဘာစီလိုနာ အသင်း အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ အသင်း ဥက္ကဋ္ဌသစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ပြုလုပ် ကျင်းပသွားမယ်လို့ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်.ကလပ် အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့နဲ့ […]
“ကန်တေ”အတွက် အင်တာမီလန် အသင်း ကမ်းလှမ်းမှုကို ချယ်လ်ဆီး အသင်း ပယ်ချ
September 12, 2020 12:26 am
ချယ်လ်ဆီး အသင်း အနေနဲ့ သူတို့ အသင်း ကစားသမား ဖြစ်သူ ကန်တေ အတွက် အင်တာမီလန် အသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်… စီးရီးအေ ကလပ် အင်တာမီလန် အသင်း အနေနဲ့ ကန်တေကို […]
Daily Show (80)
A Bite of China Ep-9
နှလုံးသားကစားပွဲ အပိုင်း (၁၂)
The Lion Guard Ep-53
American Election Ep-2
Hero World Challenge ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို တရားဝင်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း အတည်ပြု ထုတ်ပြန်